IKHITSHI PHANTSI KWESIBANE SEKHABHINETHI (ISIKHOKELO SOYILO) - UKUKHANYISA
Eyona ukukhanyisa Ikhitshi Phantsi kwesibane seKhabhinethi (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sethu ekhitshini phantsi kwesibane sekhabhinethi kubandakanya iintlobo ezithandwayo, iindleko kunye nemveliso efunekayo.
Ikhitshi phantsi kwesibane sekhabhathi, ngenye indlela esaziwa ngokuba phantsi kwesibane sekhitshi, ngumzekelo wento ekucingwa ngayo njengokukhanyiswa kwemisebenzi. Olu hlobo lokukhanyisa lubekwe ngendlela ekunceda ukuba wenze imisebenzi, ukuze ubone indawo yakho yokusebenza kunye nento oyenzayo ngokucacileyo.
Ngaphantsi kwesibane sekhitshi ukukhanyiselwa ayenzelwanga ukuba ibe ngowona mthombo wokukhanya ekhitshini lakho, zifana nezibane ezigqamileyo ngengqondo yokuba zibekwe ngobuchule kwindawo apho unokuziva ufuna ukukhanya ngakumbi ukuze usebenze okanye ukuphucula imeko yegumbi .
Iindidi zeKhitshi Phantsi kwesibane seKhabhinethi
Ukukhokelwa Phantsi KweKhabinethi Izibane Zasekhitshini
Yeyiphi eyona ilungileyo phantsi kwesibane sekhabhathi ekhitshini?
Zingaphi izibane ozifunayo phantsi kwesibane sekhabhathi?
Yimalini ephantsi kweendleko zokukhanyisa kwikhabhinethi?
Ngaphantsi kwekhabinethi izibane zekhitshi ziza ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo. Zikwahlelwa ngendlela ozifaka ngayo.
Zimbini iintlobo eziphambili zangaphantsi kwezibane zekhitshi zekhabhinethi ezihlelwe ngokofakelo. Ezi zibane ze-plug-in kunye nezibane zecingo ngqo.
Ezi zizinto ezikhaphukhaphu ekulula ukufakwa kuba azidingi ukuba ufake ezinye iintambo zombane ekhitshini lakho.
Xa uthenga ezi zinto zilungisiweyo, ziza nezakhelwe kwiplagi. Umbono kukuba, nyusa isibane sokukhanyisa naphina apho ufuna khona kwaye uyixhome. Qiniseka nje ukuba iplagi ingafikelela kwindawo ekhoyo.
Ezi zizinto ezikhanyayo ezifuna ukufakelwa ngokuthe ngqo kwinkqubo yombane yekhaya lakho. Awunakuzenzela ngokwenyani ngezi zinto zilungisiweyo; enye into, kuya kufuneka ubhentsise iingcingo zombane zegumbi lakho ukuze uncamathisele izinto zokubiyela kuwo.
Uncedo lokuhambisa izibane zetambo abantu abaninzi baziva ngathi zikhangeleka zicocekile njengoko iingcingo zifihlwe kakhulu. Ikwakhulula amagumbi iivenkile zombane zezinye izinto-ezinje ngezixhobo zombane. Kananjalo, ngale ndlela unokunxibelelana nazo zonke izibane zakho kutshintsho olunye okanye kwi-dimmer abanye abantu abayifumana ilunge ngakumbi.
Xa kuziwa kwifom kunye nokusebenza, kukwakho iintlobo ezininzi eziphantsi kwezibane zasekhitshini zekhabinethi. Uninzi lwezi luza kuzo zombini iiplagi kunye nokutshintsha ngokuthe ngqo kwocingo.
Ezi ziityhubhu ezibengezelayo ezibekwe phantsi kwe- iikhabhathi zasekhitshini apho banokukhanyisa khona kwiikhawuntari ezingezantsi. Ngelixa olu yayiluhlobo oluthandwayo oluphantsi kwezibane zasekhitshini zekhabinethi, kutshanje ziye zaqala ukungathandwa njengoko abanye abantu beziva ngathi ukukhanya kwe-fluorescent kukukhazimla.
Inye into elungileyo malunga neziqwengana ze-fluorescent ekufuneka ucinge ngokuzibandakanya kuyilo lwakho lokukhanyisa ikhitshi kwikhabhathi yindlela ezazifakwe ngayo. Ubukhulu becala zazifakwe kwikona apho udonga lwekhitshi lwaludibana khona nekhabhathi. Ngokugcina izinto ezikhanyayo zikhanya zisiya phaya, uyaqinisekisa ukuba azingeni endleleni yakhe nabani na osebenza kwikhawuntara yasekhitshini.
Izibane ezijikelezayo zihlala zibizwa ngokuba zizibane zepuck kuba kufanelekile ukuba zifane -milo ukuba ayizobungakanani beepucks zehokhi.
yintoni indoda enxiba umsesane wayo womtshato
Ezi zixhobo zokukhanya zijikelezileyo lukhetho oludumileyo phantsi kwezibane zasekhitshini zekhabinethi njengoko zibonelela ngokukhanya kugxilwe kwizithuba zomsebenzi ezithandwa ngabantu abathile.
Iimodeli ezininzi zokukhanya okujikelezayo kulula ukuzifaka ngokuncamathela kumphezulu kwaye kulula ukuzilayisha ngempompo enye. Kaninzi kaninzi azidingi zintambo kwaye zibaleke kwiibhetri ezinokubuyiselwa.
Eyona ngxaki iphambili kwezi zihlala zihlala zifuna ukuvulwa ngexesha elinye kwaye kuya kufuneka zitshintshwe rhoqo ziibhetri zazo. Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukukhanya kwazo. Iindidi ezininzi zezibane ezijikelezayo zibonelela kuphela malunga ne-50 ukuya kwi-60 ye-lumens engaphantsi kakhulu kunenani elinconywayo lokukhanyisa ngokufanelekileyo indawo ye-countertop.
Uncedo lwezibane ze-LED kukuba banobomi obude benkonzo, oko kuthetha ukuba bakubiza imali encinci yokufaka kunye nokusebenza. Zisebenza kakuhle ngamandla.
Umzobo omnye omkhulu kwizibane ze-LED banokuthi beze kuluhlu lwemibala, bavelise ukukhanya okufudumeleyo nokupholileyo ngokokuthanda kwakho. Ziza kumanqanaba aliqela okuqaqamba.
Xa uthetha ngokukhanyisa ekhitshini, enye inzuzo enkulu ekusebenziseni izibane ze-LED ikhupha ubushushu obuncinci. Unokufumana izibane zomtya kunye nezibane zepuck ezisebenzisa iibhalbhu ze-LED kodwa kukwakho neendlela ezithile zokukhanyisa ezisebenzisa ngokuthe ngqo ii-LED.
Lance bass kunye nomichael michael turchin umtshato
Ezi zibane ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba zizibane. Zizinto ezinokufikeleleka kwaye uzenzele ngokwakho ukufaka phantsi kwezibane zasekhitshini.
Izibane zeTape ngokusisiseko ngumtya weteyipu eguquguqukayo efakwe kwii-LED. Ziyakhuselwa kumphezulu ngokuncamathela.
Ungazithenga ezi zibane kwiikhoyili kwiivenkile zehardware kwaye xa uzikhupha, zinokulingana phantse naphina. Bahlala beza nesincamathiselo seplagi ukuze ungafaki ukufaka i-wiring eyongezelelweyo, qiniseka nje ukuba isinamathiselo seplagi sinokufikelela kwindawo ekufutshane.
Izibane zentambo ziyafana nezibane ze-tape ngengqondo yokuba zingumtya wezibane ze-LED. Umahluko uza kubukhulu.
Izibane zeentambo ziza kububanzi obukhulu kunokuba izibane zetape zenza. Zizibane ze-LED ezifakwe kwiiplastiki zeplastiki. Le ityhubhu inokufakwa ngokufanayo kwizibane zeetape kwaye ize nezifakelo zeplagi.
Ubume kunye nobukhulu bakho phantsi kwekhabethe yokukhanyisa ukukhanya kufuneka kuhluke ngohlobo lokukhanyisa olifunayo.
Ukuba ufuna ukukhanya ngakumbi ukukhanyisa indawo yakho yonke yasekhitshini, olona hlobo lubalaseleyo phantsi kwesibane sekhabhathi ukuba ube nemicu njengoko kukhanyisa ngokulinganayo. Ukuba, nangona kunjalo, ufuna ukugxila ekukhanyeni kwindawo ethile, kungcono ukusebenzisa izibane zepuck.
Oku Isiqithi sasekhitshini Iimpawu phantsi kwezibane zezibani kunye nezibane zekhabinethi yokukhanyisa izinto zokuhombisa.
Inani leemitha zokukhanya ozifunayo ezilungileyo phantsi kwesibane sekhabhathi ziya kuxhomekeka kwinto oyisebenzisela yona. Ukuba ufuna ikakhulu ukukhanya kwesibane sekhabhathi ukuba kukhanye njengokukhanya kwe-aksenti, kuya kufuneka uye kwizibane ze-150 ukuya kwi-250.
Ukuba, nangona kunjalo, isizathu sokuba ufaka phantsi kwesibane sekhabhathi kungenxa yokuba ucinga ukuba ufuna ukukhanya ngakumbi kwemisebenzi, jonga izibane kwi-lumens eziyi-175 ukuya kwezi-550.
Ngaphantsi kwesibane sokukhanyisa yenye indlela yokuhambisa ukukhanya kanye apho ufuna khona. Le bar yekhaya imanzi isebenzisa phantsi kwesibane sokukhanyisa ukongeza umdla obonwayo kunye nokunceda ukukhanyisa i-countertop.
Ixabiso eliphakathi leprojekthi yokukhanyisa kwikhabhinethi imalunga ne- $ 1,500 ukuya kwi-2,500 yeedola. Ixabiso lilonke liya kuchaphazeleka ngohlobo lwezibane kunye nendawo eza kulayitwa.
Ukuba ukhetha ukungena kwi-plug-in iintlobo zezixhobo zokukhanya , ungonga kwiindleko zabasebenzi njengoko ungazukufuna ukuqesha umbane. Umbane uya kubiza i-avareji ye- $ 50 ukuya kwi-100 ngeyure kwikhabhinethi ephantsi okanye phantsi kweprojekthi yokukhanyisa.
Ukukhanya okuqaqambileyo kwe-LED Puck Light 6 Pack ... $ 34.98$ 49.99 umthengisi ogqibelele Ifowuni: (22121) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
yintoni iqela lesidanga
Iiglobhu zombane 65311 Leclair, 12 ', Dark Bro… $ 28.23$ 29.99 umthengisi ogqibelele (Ngo-1937) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Izinto ezisisiseko 7.5 'Isibane seAkhawunti esiqaqambileyo, iBlac… $ 43.98 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-155 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Lvyinyin Phantsi kweKhabhinethi yezibane ze-LED, i-Wirel… $ 20.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-349 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
indawo yokugcina umtshato kufutshane nam
Iindawo ezintle zekhefu lomtshato kumeyi
las vegas kuhambo lwendlela sedona
Iiprofayili zangoku zebhodi esezantsi